Kuhle Umkhiqizi we-IP800 Electric Linear Actuator kanye neFektri | IHoodland
● UMax Thrust: 1200 N.
● Isivinini esikhulu: 66mm / s
Incazelo YomkhiqizoI-IP800 Series High Speed ​​Electric Linear Actuator, iyithuluzi lokushayela ngogesi eliguqula ukunyakaza kwemoto ekuhambeni okuphindayo kokuphinda kwenduku ye-push. Ingasetshenziswa njengomshini osebenzayo ngokugeleza kwenqubo okulula okulula noma okuyinkimbinkimbi ukuthola isilawuli kude, isilawuli esiqashiwe noma isilawuli esizenzakalelayo. Uchungechunge lwe-IP800, ngomklamo wokonga, luhlinzeka ngezinzuzo zombili amandla nokufakwa ngaphakathi, kungasetshenziswa kakhulu ezindlini, ekhishini ukufakwa nokunye.
I-IP800 Series Electric Linear Actuator, enejubane elikhulu (ingafinyelela ku-66mm / s), ifaka phakathi amadivayisi ahlukahlukene athule kepha anamandla okufaka izicelo eziningi ezidinga ukunyakaza okuqondile ngokunyakaza okuqondile. Zikulungele ukufaka izicelo lapho isikhala sokufaka sinqunyelwe, njengokuvula iwindi noma umshayeli wemoto oguqukayo. Ngokungafani nama-motor ajwayelekile kagesi ahamba ngokunyakaza okuyindilinga, ama-actuator aqondile asebenza kulayini oqondile. Ngenxa yalokhu, ukunyakaza okuhamba ngogesi kuyakwazi ukusunduza nokudonsa kanye nekhono lokushelela, ukutsheka, ukuphakamisa nokuwisa okwenza kube yithuluzi elinemisebenzi eminingi nethembekile.
Linear actuator uhla izici ezihlukahlukene umthwalo amakhono, unhlangothi ubude kanye nesivinini. Umthwalo wokucindezela umthwalo (olingana nomthwalo wokudonsa umthwalo) usuka ku-150N kuye ku-800N, ngamanye amagama, i-IP800 uchungechunge lwentambo eqondile ingacindezela / idonse ama-15kgs kuye kuma-80kgs. Sicela ungalayishi ngokweqile lapho usebenzisa ama-actuaors, ngaphandle kwalokho kuzothinta impilo yesevisi.
Ubude be-stroke yochungechunge lwe-IP800 busuka ku-30mm kuye ku-1000mm, uma unezikhalazo ezikhethekile mayelana nobude be-stroke, ungachofoza ngqo ku-BUZA ukushiya umlayezo noma uthumele i-imeyili ngqo ekuthengisweni kwethu ku cassie@thehoodland.com , Sizokuphendula ngesikhathi sokuqala.
Ama-actuator aqondile we-IP800 afaka nokushintshwa komkhawulo okuvimbela ukuthi insimbi ingashisi noma ivimbe imoto uma nje kutholakala ubude besifo sohlangothi, kuqinisekisa ukuthi idivayisi ihlala isikhathi eside futhi ayinakekelwa kangako.
I-IP800 Series ifaka idizayini ehambelana nezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene ezidinga isikhala esilinganiselwe sokufakwa.
Mayelana nephakeji, yonke i-actuator eqondile izobe igcwele ifilimu ye-bubble, bese ifakwa ebhokisini uma kwenzeka umonakalo ngesikhathi sokuhamba. Sicela uhlole izimpahla okokuqala lapho uthola, uma kukhona umonakalo ngemuva kokuvezwa, xhumana nathi ngokushesha.
Ukuthola into eningiliziwe yomkhiqizo, sicela ubheke ukhiye woku-oda kanye nephepha ledatha ku-Data Sheet, noma uxhumane nathi ngqo nge-imeyili noma ngocingo.
● I-Voltage yokufaka: DC 12V / DC 24V
Langaphambilini IP60 Electric Linear Actuator
Olandelayo: IP1200 Electric Linear Actuator
Double Acting eyisilinda Actuator, I-Forage Abavuni Actuator, I-Low Noise Linear Actuator, I-Dc 24v Linear Actuator, Isilinda Actuator, Electric Linear Actuator,